ဘာကြောင့် ဘုရားကျောင်း တတ်ရတာလဲ။ | Rev.U Min Lwin
Posted by ဦးမင်းလွင် on 01/10/2013
Posted in: တရားဟောချက်.	4 Comments
ကျွန်တော် တွေ့ဘူးတဲ့ ခရစ်ယာန်အချို့ဟာ ဘုရားကျောင်း သွားတယ် ဆိုတာ ခရစ်ယာန် ဖြစ်လို့ သွားတယ် လို့သာ သဘော ထားကြတယ်။ အချို့က ရွာကို လူကြုံ တစ်ဦး တစ်ယောက်များ ရှိမလား ဆိုပြီး သွားကြတယ်။ အချို့ အသင်းတော်က အကူအညီ တစ်ခုခု ရမလားဆိုပြီး သွားကြတယ်။ အချို့ အလုပ်အကိုင် ရှာဖွေရာ နေရာ သဘောမျိုး ရှိကြတယ်။ အချို့က သီချင်းဆို လေ့ကျင့်ရာနေရာမျိုး သဘောထားကြတယ်။ အခြား အကြောင်း အရင်းတွေလည်း ရှိပါဦးမယ်။ ဒါပေမဲ့ ခရစ်ယာန်ဆိုတာ နက်နက်နဲနဲ ပြောမယ်ဆိုရင် ယုံကြည်သူဆိုတာ၊ ဒီထက် နက်နဲရဦးမယ်ဆိုရင် ကယ်တင်ခြင်းရပြီး သူတိုင်းဟာ ဘုရားကျောင်းကို သွားသင့်ပါတယ်။
ခရစ်ယာန် တစ်ဦးဟာ ဘာကြောင့် ဘုရားကျောင်းကို သွားရတာလဲ ဆိုတာကို သင်စူးစမ်းလေ့လာဘူး ပါသလား။ သင့်ကိုယ်တိုင် အဲဒီအကြောင်းကို လေ့လာခဲ့ဘူးခြင်း မရှိဘူးဆိုရင် အခု ဖော်ပြလိုက်တဲ့ အချက် (၁၃) ချက်ဟာ သင့် အတွက် အထောက်အကူ ဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။
ဘုရားကျောင်းကို သွားတယ်ဆိုတာ ကယ်တင်ခြင်းရဘို့ ကောင်းကင်ကို သွားဘို့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဘုရား ကျောင်းကို သွားတယ်ဆိုတာ အရေးကြီးပါတယ်။ သင့်အသက်တာကို တိုးတက်ဘို့ အကူအညီ ပေးပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် အဲဒီ ဘုရားကျောင်းကို သွားတဲ့ အလေ့အကျင့်ကို ထိန်းသိမ်းရပါလိမ့်မယ်။
အောက်ပါ အချက်များကို လေ့လာကြည့်ပါ။
၁။ ဘုရားသခင် သတ်မှတ်ထားတဲ့ နေ့ရက်ကို တန်ဘိုးထား လေးစားခြင်းကို နာခံမှုနဲ့ သက်သေထူ တာဘဲ ဖြစ်ပါ တယ်။ ဓမ္မဟောင်းခေတ်မှာကတည်းက ဘုရားသခင်အတွက် တစ်ပတ်မှာ တစ်ရက် အချိန်ပေးဘို့ တောင်းဆို ထားတာ ရှိပါတယ်။ (ထွက်မြောက်ရာ ၂၀း၈)
၂။ ကျွန်တော်တို့လို ခရစ်တော်၌ ရှိသော ညီအကို မောင်နှမများရှိတဲ့ ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ ဆိုင်တဲ့ အသိုင်းအ၀ိုင်းနဲ့ သက်ဆိုင် မှု ရှိကြောင်း ဖော်ပြဘို့
၃။ ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင် ကျမ်းစာဖတ်ခြင်းကိုသာ အမြဲတမ်း မှီတည်နေတာထက် အခြားလူများရဲ့ ဦးဆောင်ခြင်း၊ သွန်သင်ခြင်း တွေအားဖြင့် ပိုမို အကျိုးရှိနိုင်တဲ့ အသက်တာကို တတ်လှမ်းဘို့
၄။ ကျွန်တော်တို့ဟာ ခရစ်တော်၌ ရပ်တည်နေခြင်းကို အမြဲသတိရရန်၊ ကျွန်တော်တို့ လုပ်ဆောင်ခဲ့ သော အပြစ်နှင့် ဒုစရိုက် ကို သိမြင် ၀န်ခံနိုင်ရန်၊ သမ္မာတရားကို သင်ကြားခံယူရန် ဖြစ်ပါတယ်။
၅။ ကျွန်တော်တို့ဟာ အစာရှောင်ဘို့၊ ဆုတောင်းဘို့၊ ဆယ်ဘို့တစ်ဘို့ ပေးဘို့
၆။ သမ္မာကျမ်းစာက အကြောင်းအရာတွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ အသက်တာမှာ ရင်ဆိုင်ရတဲ့ အမှုအရာ တွေကို အကူအညီ ရယူဘို့
၇။ အခြားသော ယုံကြည်သူတွေရဲ့ ခြားနားတဲ့ အမြင်များမှ ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ အသက်ရှင်မှုမှာ ရုန်းကန်ရတဲ့ အကြောင်း အရာ တွေကို ကြားနာနိုင်ဘို့
၈။ အသင်းတော်ထဲမှာ ရှိတဲ့ မိမိတို့ရဲ့ လက်တွဲဖော် ယုံကြည်သူများရဲ့ သက်သေခံချက်တွေ၊ အတွေ့အကြုံတွေကို ကြားနာနိုင်ဘို့
၉။ ဘုရားသခင်ရဲ့ မေတ္တာနဲ့ သတိပေးချက်တွေကို ကြားနာနိုင်ဘို့
၁၀။ ဘုရားသခင်ကို မသိကျိုးကျွန်ပြုပြီး မိမိရဲ့ ထုံးစံအစဉ်အလာတွေကိုဦးစားပေး ဆောင်ရွက်မှုတွေ ရှိခဲ့ရင် သတိရ ဆင်ခြင်နိုင်ဘို့
၁၁။ ကျွန်တော်တို့၏ ယုံကြည်ခြင်းကို ဆုတောင်းခြင်း၊ အစာရှောင်ခြင်း၊ ဆယ်ဘို့တစ်ဘို့ ပေးခြင်း၊ ဂုဏ်တော် ချီးမွမ်း ခြင်း၊ သက်သေခံခြင်းအားဖြင့် ဖော်ပြရန်
၁၂။ ယုံကြည်သူများဟာ နှုတ်ကပတ်တော်ကို ကြားသိခဲ့ပြီး အသက်ရှင်ရတဲ့ ရက်သတ္တပတ်နဲ့ အသက်တာရဲ့ အစိတ်အပိုင်းကို ကျေးဇူးသိ တုန့်ပြန်ဘို့
၁၃။ အသက်တာထဲက ဒုက္ခ၊ ပြဿနာ၊ မိသားစု၊ အလုပ်အကိုင်တွေ အကြားမှာ နစ်မြုတ်နေပေမဲ့ ကိုယ်တော့်ကို မမေ့ ဘူး။ ကိုယ်တော်နဲ့ မိတ်သဟာရပြုတယ်ဆိုတာ သက်သေထူဘို့
အခြားဖော်ပြနိုင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေလည်း ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါသေးတယ်။ တကယ်တော့ စာတန် ဟာ ယုံကြည်သူတွေကို နည်းပရိယာယ် အမျိုးမျိုးနဲ့ ဘုရားကျောင်းတွေကို မရောက်နိုင်အောင် လုပ် ဆောင်နေပါတယ်။ ယခုခေတ်မှာ ဘုရားကျောင်းမသွားနိုင်သော်လည်း အင်တာနက်ကနေ နှုတ်ကပတ်တော်ကို ကြားနာနိုင်တယ်။ ယုံကြည်သူခြင်း မိတ်သဟာရဖွဲ့နိုင်တယ်။ အလှူငွေ ပို့ပေး လို့ရတယ်။ ဆုတောင်းချက်တွေ တင်လို့ရတယ် ဆိုပြီး လူတိုင်း ခံစားနေကြပါတယ်။ အင်တာ နက် မရှိရင်တောင် တယ်လီဖုန်းနဲ့၊ အခြားဆက်သွယ်ရေး မီဒီယာတွေနဲ့ ၀တ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းတွေကို လုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘုရားကျောင်းကို မသွားရင် ဖြစ်တယ်လို့ ခံစား နေသူတွေ ရှိပါတယ်။
ကိုယ်တော်ကို ချစ်ပြီး နှုတ်ကပတ်တော်တွေကို တန်ဘိုးထားတယ်ဆိုရင် ဘုရားကျောင်း ဆိုတာ တကယ် သွားသင့် ပါတယ် (သေချာပေါက် သွားရမယ်။)
အခုဖော်ပြလိုက်တဲ့ အချက်တွေဟာ ကျွန်တော့် ကိုယ်တိုင် ယုံကြည် လက်ခံထားတဲ့အချက်တွေ ဖြစ်ပြီး သဘောမတူ လက်မခံနိုင်သူများ ရှိခဲ့ရင်လည်း ကျွန်တော်ဟာ ငြင်းမှာ မဟုတ်ပါဘူ။ ကိုယ့်သဘော ကိုယ့်ဆန္ဒသာလျှင် အရေး အကြီးဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီနေရာမှာ မိမိ ဖတ်ခဲ့တဲ့၊ သိခဲ့တဲ့၊ ကြားခဲ့တဲ့ နှုတ်ကပတ်တော်တွေကို အတည်ပြုပြီး ဘ၀အသက်တာအတွက် မှတ်တမ်း တင်ရမယ့် နေရာဖြစ်တယ်ဆိုတာ ဝေငှလိုက်ပါတယ်။
← ဘုရားသခင်နှင့်အတူ လျှောက်လှမ်းသည်ဆိုရာဝယ် . . .
စာဖတ်ပရိသတ်အား တောင်းပန်ခြင်း →
4 comments on “ဘာကြောင့် ဘုရားကျောင်း တတ်ရတာလဲ။”
Ngwayaw Darlagalo on 01/10/2013 at 12:27 PM said:
Salai Kyaw Kyaw on 07/10/2013 at 10:12 AM said:
ဆရာရဲ့ မတတ်တခေါက်နဲ့ရေးတဲ့စာ တွေဟာ မထိတထိနဲ့ အရမ်းခွန်အားရပါတယ်။ ကျွန်တော်အမမြဲ ခွန်းအားပေး
နေပါတယ်။ ဘုရားသခင်သည ဒိထက်သာ၍ တတ်ပြီးတော်ပြီး ဝိညာဉ်တော်လမ်းပြမှုနဲ့ ဆက်ရေးပေးပါလို့ တောင်းခံ
Salai Kyaw Kyaw on 07/10/2013 at 10:15 AM said:
ဆရာရဲ့ မတတ်တခေါက်နဲ့ရေးတဲ့စာ တွေဟာ မထိတထိနဲ့ အရမ်းခွန်အားရပါတယ်။ ကျွန်တော်အမြဲ ခွန်းအားပေး
နေပါတယ်။ ဘုရားသခင်သည် ဒိထက်သာ၍ တတ်ပြီးတော်ပြီး ဝိညာဉ်တော်လမ်းပြမှုနဲ့ ဆက်ရေးပေးပါလို့ တောင်းခံ
ပါရစေ။ ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။အမြဲတမ်း ဆရာရဲ့စာကို ဖတ်ပြီးခွန်အားယူနေသူပါ။
ဦးမင်းလွင် on 07/10/2013 at 11:34 AM said:
ကျွန်တော့်ရဲ့ ဘလောဂ်ကလေးကို တန်ဘိုးထား လေးစားပြီး နှုတ်ကပတ်တော်များကို ဖတ်မှတ်နေကြောင်း ကြားသိရတဲ့အတွက် အလွန်ဘဲ ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ ဖြစ်ရပါတယ်။ အားပေတဲ့အတွက် အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။